ဓမ္မ: July 2009
၄၇ နှစ်မြောက် ၇ ရက် ဇူလိုင် ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံ အမှတ်တရ ...
ပီကာဆို ငှက်ရဲ့တောင်ပံ ခတ်သံမှာ
“ဒါဖား” ငြိမ်းချမ်းရေး တဲ့
ဈေးကွက်ရ ပျော်ရွှင်ခြင်း တိမ်တိမ်မှာ
အချိန်တွေကို ရှည်လျှားစေလိုက်ပြန်ရဲ့ …။
အဲဒီ အမှောင်တွင်းနက် ကျဉ်းကျဉ်းထဲ
သမုဒ္ဒရာအောက် မီးတောင်များရှိလေရဲ့ …။
ကုန်ဆုံးလွန်မြောက် ပစ်လိုက်ချင်ပြီ။ ။
ဇာတိ ဇရာ၊ ဗျာတိ မရဏာ
“လူ” ၏ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်စံနှုန်းကိန်း
စ်ိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ထဲ ကျွံနစ်
ခပ်မဆိတ် နေပစ်လိုက်ချင်ပြီ။ ။
ကိုယ်ကပဲ ရင်းစားပေးရမှာ တွန့်နေတာလား
ဒို့တတွေ လုံးပါး ပါးလို့ ။
သူ့ အလိုလို ကျဆုံးသွားမှာပါတဲ့
သူတို့ကပဲ ခေတ်ရှေ့ ကြိုရောက်နေတာလား
စကားလုံး ပဉ္စလက်တွေ ကခုန်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့
ဆိုခဲ မြဲတတ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းတို့
အတူတွဲ ခုတ်မောင်းနေတဲ့ ရထားတစီးခမျာ
စိတ်ညစ်လိုက်တာဗျာ ။ ။
*ပလိပ်= ပြင်သစ်ဖြစ်တည်မှုပဓာန၀ါဒ စာရေးဆရာကြီးအဲလ်ဘတ်ကမူး၏ ၀တ္ထု
ဟဲလို ဦးအားလား ဘယ်မှာတွေ့ကြမလဲဟင်
၉၂ နှစ်ပြည့် လူထုအမေသို့ အလွမ်းစာ
“အမေ နေကောင်းလား” လို့
ခရီးရောက်မဆိုက် ကျနော်တို့ ပြေးတွေ့တော့
“ငါ့သားတို့ ဘယ်ရထားနဲ့ လာကြလဲကွဲ့
ထိုင်ကြ … ထိုင်ကြ” တဲ့
နွေးထွေးတဲ့ အမေ့ နှုတ်ဆက်သံ
ကြည်မွေ့တဲ့ အမေ့ အပြုံး
ကျနော်တို့ လန်းဆန်းခဲ့ရပါတယ် အမေ …။
“အမေ … ဒီမှာ ဆရာမြေဇာ
ဟိုဘက်က ကိုချစ်ဝင်းမောင်” လို့
ခပ်ရို့ရို့ ကျနော် မိတ်ဆက်တော့ …
အမေ အကုန်လုံး မြင်တာပေါ့” ဆိုပြီး
အေးမြတဲ့ မြစ်တစင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် အမေ …။
“ငါ့သားတွေ အရက် သိပ်မသောက်ကြနဲ့နော်”
“အမေတို့ဘက်ကလူတွေ အသက်ရှည်တာကိုပဲ အမေမြင်ချင်တယ်”
မဂ္ဂဇင်းတွေ အခြေအနေ ကောင်းကြရဲ့လား
ကိုဝင်းငြိမ်း၊ ကလျာနဲ့ဆို ဒီလေးအုပ်ပဲ ရှိတာ
အမေ့ကို စာမူခ မပေးနဲ့နော်” လို့
ပီတိတွေနဲ့ အားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် အမေ …။
ကျနော်လို အယ်ဒီတာ ငချွတ်ငတားလေးကို
အမေက စာမူတွေ ချီးမြှင့်ပြီး
အဓိက အကြောင်းတရားပါ အမေ …။
ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ရသတွေ ပြည့်ဖုံး
ပျော်လို့မဆုံး ပြုံးလို့မ၀ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ် အမေ …။
ကျနော်တို့ ဆက်လျှောက်နေနိုင်တာပါ အမေ …။
အမေဟာ ကျနော်နဲ့ မဝေး
ကျနော့်ရဲ့ အတွေး၊ ကျနော့်ရဲ့ဘေးမှာ
ယုံမြဲယုံကြည်လျက်ပါ အမေ …။ ။
မွှေးမြ မကြွေ ..အိုအမေ
လူတန်းစားတိုက်ပွဲ တရားမျှတမှု လူ့အခွင့်အရေး
ဒီမိုကရေစီရေး ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာ
ရေ မြေ လေ မီး
(အမေလူထုဒေါ်အမာရဲ့ အသက် (၉၂) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကို ဒီကဗျာနဲ့ ဦးညွတ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်)
(၂၁) ရာစု ငယ်ရွယ်သူအိမ်မက်များ
ပိုးဖလံတွေလို ဟိုတစ ဒီတစ
အပြင်းဆုံးမီးနဲ့ ထိုးခွဲပစ်ချင်တယ်။ ။
Message from U Win Tin
This's the poetic message of U Win Tin, the veteran
journalist-cum-politician given through Mr. Paulo Sergio Pinheiro
to all the human beings in the world.
မှတ်ချက်။ နိုဝင်ဘာ (၁၅) ၇က်က အင်းစိန်ထောင်တွင်း သွားရောက်လေ့လာခဲ့သော
မစ္စတာပီညဲရိုးကို သတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကရေးပေးလိုက်သည့် ကဗျာဖြစ်သည်။
အ … ညီလာခံ
ငါ … အနုပညာမြောက်အောင်
ရေပေါ်ဆီ မျက်နှာပြောင်တိုက်မှုများ …။
ငါတို့ ဘ၀ပတ်ဝန်းကျင်မှာ …။
မင်းဟာ မဟာအနုပညာရှင်က၀ိအကျော်ပေါ့ …။
ငါ့လျှာကိုသာ ဖြတ်လိုက်ချင်ရဲ့။ ။
သံဃာ၊ ကျောင်းသား၊ ပြည်သူ
ဖက်စစ် စစ်အာဏာရှင်တို့ ကျဆုံးစေ။
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဓမ္မစက်က
အရက်စက်ဆုံး အာဏာစက်ကို အောင်ပွဲခံ
ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ ။
(ဤကဗျာဖြင့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအတွင်း အသက်၊ ဘ၀၊ သွေး၊ ချွေး ပေးဆပ်ခဲ့ကြ၊ ပေးဆပ်နေဆဲဖြစ်သော ရဟန်း၊ သံဃာ၊ ကျောင်းသား၊ ပြည်သူအပေါင်းအား ဦးညွှတ် ဂုဏ်ပြုပါသည်။)
မာလိန်မှူးဆိုတာ အတူပါသွားရမယ်” တဲ့။
၀ါကျတကြောင်း လပ်သွားခဲ့။ ။
ဒါမှမဟုတ် သွေးနံ့ရတဲ့ ပင်လယ်လား
ငါတို့ ရေနန်းယာဉ်သာ သင်္ဘောကို မမျှော်နဲ့
ငါတို့ ကောင်းဘွိုင်ကြီး ဂျွန်ဝိန်းကို မမျှော်နဲ့
ငါတို့ ဖိနပ်သာ ငါတို့ သေနတ်ဖြစ်တယ်
ဆွေးနွေးဖို့ မရှိတော့ပါ။ ။
ကိုယ့်ရင်သွေးကို ရင်ထဲထည့် ၀ှက်တာတောင်
သံဃာတော်တွေရဲ့ သွေးတွေသာ နီရဲလို့။
တိုက်ပွဲက ငါတို့ကို စိန်ခေါ်နေပြီ
ညက ရေဒီယိုမှာ ကြေညာသွားတယ်
တိုက်ပွဲက ငါတို့ကို စိန်ခေါ်နေပြီ။
ပခုက္ကူသံဃာနှစ်ပါးကို ဓာတ်တိုင်မှာ ကြိုးတုတ်ပြီး ရိုက်သတဲ့
ညက ရေဒီယိုမှာ ကြားလိုက်ရတယ်
သံဃာတော်တွေ ပတ္တနိက္ကုဇ္စန ကံဆောင်နေကြပြီတဲ့
ညက ရေဒီယိုမှာ ပြောသွားတယ်
ညက ရေဒီယိုမှာ အသံလွှင့်သွားတယ်
ဂျပန်သတင်းထောက်ကို စစ်ခွေးတွေ ပစ်သတ်လိုက်တာ
ညက တီဗွီမှာ ကြည့်လိုက်ရတယ်
စစ်ခွေးတွေ ပစ်သတ်တာ ပြည်သူတွေသေကုန်ပြီတဲ့
ညက ဘီဘီစီမှာ ကြေညာသွားတယ်
တိုက်ပွဲက ငါတို့ကို စိန်ခေါ်နေပြီ။
ညက အာရ်အက်ဖ်အေမှာ ကြားလိုက်ရတယ်
မနေ့က အင်တာနက်မှာ ကြည့်လိုက်ရတယ်
သံရုံးတွေရှေ့မှာ ဆန္ဒပြရုံနဲ့ ပြီးကြတော့မှာလား
ဂမ်ဘာရီ မနေ့က ပြန်သွားပြီတဲ့
ညက ဗွီအိုအေမှာ ပြောသွားတယ်
ဆင့်ဟိုဒင်း ခွေးမျော်ရုံနဲ့ ပြီးကြတော့မှာလား
ဆန္ဒပြသူတွေကို စစ်ခွေးတွေ ၀ိုင်းရိုက်တာ
ရေဒီယိုမှာ ဟိုပြောဒီပြောနဲ့ ပြီးကြတော့မှာလား
သံဃာတွေ ပြည်သူတွေ သွေးချောင်းစီးနေတာတောင်
ပျံလွန်တော်မူသွားတဲ့ သံဃာတွေက လမ်းပြသွားခဲ့ပြီ
လမ်းမပေါ်မှာ ပစ်သတ်ခံရတဲ့ ပြည်သူတွေက လမ်းပြသွားခဲ့ပြီ
အဖမ်းဆီးခံ သံဃာနဲ့ပြည်သူတွေက လမ်းပြသွားခဲ့ပြီ
တိုက်ပွဲက ငါတို့အားလုံးကို အကြီးအကျယ် စိန်ခေါ်နေပြီ
တိုက်ပွဲက ငါတို့အားလုံးကို အကြီးအကျယ် စိန်ခေါ်နေပြီ။ ။
ဒါမှမဟုတ် သားသတ်သမားတို့ရဲ့ စစ်ကြောရေးညတွေမှာ
အဲဒီမှာ ဆန်နဲ့ ဓာတ်ငွေ့ဟာ
လွတ်လပ်မှုကို ကာကွယ်ဖို့ မဟုတ်တဲ့
စစ်ဘီလူးများကို ကူညီမစနေရဲ့ ...။
ပြောင်းလဲပေးတဲ့ စီးပွားရေးသာဖြစ်တယ် ...။
တိတ်တိတ်နေခိုင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးသာဖြစ်တယ် ...။
ကမ္ဘာမကြေဘူးသီချင်းကို သွေးနဲ့ဆိုခဲ့ရတယ် ...။
သင်တို့ရဲ့မျိုးဆက်များနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့ ... ... ...။
ဟော့ဒီ သီချင်း `ကမ္ဘာမကြေ´။
သမိုင်းသစ်တံခါးကို စုံကန်ဖွင့်ကြစို့။ ။
နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်နား… ကွာသွားတာတောင်
(စက်တင်ဘာ (၁၈) စစ်အာဏာရှင်တို့ ပြည်သူလူထုကို ကျွန်ပြုခဲ့ခြင်း အမှတ်တရ)
လေတိုက်တိုင်းသာ သစ်ရွက်တွေ ကြွေရမယ်ဆိုရင်
ဆင်းရဲတာကို ကံကြမ္မာလို့ ရိုးမယ်ဖွဲ့ရင်
စခန်းတခုကို ရန်သူကသိမ်းတိုင်း သိမ်းတိုင်း
ငါတို့လူတွေ စိတ်ဓာတ်ကျလို့ နိုင်ငံခြားသွား၊ ဘေးထွက်ထိုင်ရင်
အဟောင်းကို စွန့်ပစ်ရဲတဲ့သတ္တိတော့ရှိရမယ်။ ။
လူတွေက သဘာဝနဲ့ လတ်တလောကြုံတွေ့နေတာတွေကို
ခွေးအူသံတွေ ထပ်ကြားနေပြန်ရ …
တရွေ့ရွေ့ ပဲ့ပဲ့ကျနေတဲ့ ကမ်းပေါ်မှာ
အဓမ္မနဲ့ အပေးအယူ ဧကစာကျင့်
ဘ၀ကို မရိုးသားမှုနဲ့ ရွက်လွှင့်ရင်း
ကျယ်နေလျက်နဲ့ကျဉ်းသွားတယ့်။ ။
၀ုန်းကနဲ… ဒီ ဂီတလှိုင်းအကြွ
ခုန်နှုန်း တလိမ့်လိမ့် ထ
ဟောဒီ နှလုံးအိမ်တွေ ပွက်ထခဲ့ကြပေါ့…..။
ရိုးမ မိုးမခ မိုး နွေ ဆောင်း အချစ်သည်းခဲ့မှုများ…
ကျော ရင် ၀မ်း ခန္ဓာ
တောင်ကုန်း ကမ်းပါးနဲ့ မြေပြန့်တွေမှာ
တော်လှန် ကဗျာ တပုဒ်အတွက်
သွေးတစက် ရှိတယ် တဲ့…..။
ရေ မပါခဲ့ ရှာကြဘူး
ပြာ ၈၈ ပြာ
ရေ တခွက်လောက် ပေးပါ အမိုးရာ…..။ ။
(Catcher in the Rye)
စာလုံးပေါင်းသင် သဒ္ဒါသင်ဆဲ စာပြင်ဆဲ။ ။
(ဖြောင့်မတ်သူ၏ အလင်းသည် ရွှင်လန်း၏။
မတရားသောသူ၏ မီးခွက်မူကား သေရလိမ့်မည်။
အမှောင်ညပြီး… အမှောင်ည… အမှောင်ည
မြေပြင်ပေါ်မှာ ရှင်သန်နေချင်သေးတယ်။ ။
(ဤကဗျာဖြင့် ၁၉-၇-၁၉၄၇ နေ့က ကျဆုံးသွားခဲ့ကြသော
ဘယ်တော့မှ မျက်နှာမသစ်ဘူးလေ။ ။
(ဤကဗျာဖြင့် (၇၊ ၇၊ ၆၂) နေ့မှစ၍ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး တိုက်ပွဲအဆက်ဆက် အသက်၊ ဘ၀၊ သွေးချွေး ပေးဆပ်ခဲ့သော ကျောင်းသားသူရဲကောင်းအပေါင်းတို့အား ဦးညွတ်ဂုဏ်ပြုပါသည်။)
ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီး (၇) တိုက်ဟာ (ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီး (၇) တိုက်ဟာ)
ပျံသန်းလိုက်စမ်းပါ ငါ့သား…။ ။
တပတ်စာတော့ ဖူလုံတယ်” တဲ့။
လမ်းမှာ ရုတ်တရက် ဆုံးပါးသွားလို့
လက်တဖျစ်စာ ဘ၀တွေ။ ။
ကောက်ကောက်ပါအောင် ထွက်ခဲ့ပြီ။ ။
NI – 063328/C
ငါ- UN နံပါတ်နောက်မှာ
မျဉ်းစောင်းစီ - /C= ထောင်နံပါတ်နောက်ဆက်တွဲထောင်ကျသင်္ကေတ
အနှစ် ၂၀ ဆိုပါလားဟေ့…။
နောင်…အနှစ် ၂၀ ကြာသောအခါမှာ
….. ….. ။
၁ / ၂၇ / ၃၀ .. မေလ
ငါတို့ရဲ့ တဘ၀စာ အိပ်မက်
ချစ်လျက်နဲ့ ဆွံ့အသင့်သော အမူအရာများ
ဘယ်တော့မှ မသေ။ ။
အသက် ၄၀၊ ၅၀
ဘွန်ဆိုင်း (Bonsai)- အိုးငယ်နှင့်(အလှ)စိုက်သည့်သက်ကြီးပင်ပု။
ဒါကို … ဒဏ္ဍာရီတပုဒ်အဖြစ်
မသိ … လုံးဝမသိ
Black & White လောကထဲ
Global Warming ကိစ္စကို
ဟော့ဒီ ကမ္ဘာမြေကြီးထဲမှာ၊ ထမင်းပန်းကန်တွေထဲမှာ
ဘယ်တော့မှ မငြိမ်းတော့တဲ့ မီးတွေထဲမှာ
ဘယ်နည်းနဲ့ပဲ တော်လှန်ရ တော်လှန်ရ
စစ်မင်းနဲ့ စစ်မြင်းတွေကို ဇာတ်လိုက်လုပ်
တို့မေ့ … တို့မေ့ …။
တို့နေ့ … တို့နေ့…။ ။
(ကဗျာဆရာကြီးတင်မိုး၏ကဗျာကို “တော်လှန်ရေးနေ့” အမှတ်တရအဖြစ် ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။)
သဘောတူ၏ မတူ၏တဲ့။ ။
စပ်ကြောင်းနှစ်ခုကြားက အပ်သွားလိုပဲ မြန်တယ်
ကွေးတရို့ - ထိုင်းရိုးရာအစားအစာ
အိုင်အယ်အို (ILO) - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချူပ်
ဆိုခဲသောစကားတို့ဖြင့် သီဖွဲ့မြဲစေအပ်သော …..
ပန်းကလေးတွေကို အလေ့ကျ မွေးဖွားတယ်
ဇာတိ၊ ဓလေ့နဲ့ အစဉ်အလာကိုထိန်းသိမ်းတယ်
ရန်သူလာ အသံပေးတတ်တဲ့ ငှက်ကလေးတွေအတွက်လုံခြုံရာ
ရိုးမြေကျ ချစ်သူ့နယ်မြေလည်းဖြစ်တယ် …။
လူရှေ့ သူရှေ့မှာ မျက်ရည်ကျမပြတတ်ဘူး
(ဘုရားသခင်ဆိုတာ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ
ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင် သိသည်ဖြစ်စေ၊ မသိသည်ဖြစ်စေ)
သူတို့နှလုံးသားထဲမှာ ထာဝရကိန်းဝပ်နေတယ် …။
သာ၍မြတ်သော မေတ္တာတရားသည်မရှိ … တဲ့
နှစ်တွေ ကမ္ဘာချီအမှတ်ရနေတော့မှာပဲ …။
မမြဲခြင်းတိမ်တိုက်တွေကို ခွင့်လွှတ်ပြနိုင်ခဲ့တယ် …။
လရောင်အောက်က အပျို၊ လူပျို ခေါင်ရည်ချိုမြ၀ိုင်းတွေမှာ
စပါးမျိုးစေ့ကို စုပေါင်းဆူးထိုး စိုက်ပျိုးချိန်မှာ
ချောက်ချောက်ချားချား ကျဆုံးနေပုံကို …။
ချစ်သူတွေနဲ့ ကွေကွင်းသွားရတဲ့အခါ ခံစားရတဲ့ဒုက္ခ
မနက်ဖြန်ဆိုတာ သစ္စာမဲ့သူတွေရဲ့ခေတ် မဟုတ်ဘူး …။
ခုတော့ … တောင်တန်းဒေသရဲ့
ဦးမညွှတ်သော တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူ …. လွမ်းရစ်နေဦးတော့။ ။
လူဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ၃၄ နှစ်မှာ
ဒေါ်လာသန်း (၅၀) လောက်တန်နေချိန်မှာ
လူပေါင်းသန်း (၅၀) ငတ်နေခဲ့တယ်။
ရင်တွေလည်း အခါခါကွဲ လဲကျလဲကျသွားခဲ့ကြရတာ
အေဘီတပ်ဦးက ကဗျာဓားတလက် ကိုထက်မိုး
ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေ ကိုယ့်အမွေကိုမှ
အညာဓာတ် အညာဓလေ့ အညာငွေ့တွေကိုမှ
ဆရာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ကျနော်တို့လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ
ကောင်းမှုကံတွေရဲ့ ကတိက မြဲပြီးသားဆိုတာ
ဟောဒီရွာ ဟောဒီအညာ ဟောဒီကမ္ဘာမှာ
၀င်းလို့ လင်းလို့ ၀င့်လို့ တင့်လို့ နေတော့မှာ
ဒီကဗျာနဲ့ ၀တ်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်ဆရာ။ ။
ညားခါစ ငါ့သူငယ်ချင်းစုံတွဲက ပိုမယုံဘူး ….
“သောမတ်စ် ဖရိုက်မင်း” ရဲ့အပြောအရ
ဒုက္ခသည်စခန်းဆုံးရင် ရွာတွေ့မယ်ထင်ပ …..
လောကဓံရဲ့ သွင်းဂိုးတိုင်း မလှမပ ….
အနှစ် (၃၀) ပြည့်မြစ်ကျဉ်းတနေရာမှာ
ဟုတ်ကဲ့ … မင်္ဂလာပါ…
Coke သောက် ဟမ်ဘာဂါစားသူနေသူများ
Hiphop သီချင်းနဲ့ လီဘာပုတ်ပြီး
အနားသတ်မရှိတဲ့ခြေလှမ်းတွေ …။ ။
တကယ့် တကယ် ကိုယ်ချစ်တာက … အပြာ။
ကိုယ့်နိုင်ငံ တောင်ယာထဲက သွေးတွေကိုမြင်ယောင်
မီးခိုးမဆုံး၊ မိုးမဆုံး၊ ယမ်းငွေ့တွေဖုံးလွှမ်း
ဧကန်တရားတွေ ထူးခတ်ခံထားရတဲ့ အကျဉ်းသား
ချစ်ရသူတွေရဲ့ ရင်ခုန်သံကို ကြားနာချင်တယ်။
တကယ့် တကယ် ကိုယ်ချစ်တာက … အပြာ။ ။
သူ့ကို ပို့ချင်၊ မြင်ချင်၊ သဂြုင်္ိဟ်ချင်လို့
ဖိုးသံရဲ့ Auto (အမှတ်တရ) စာအုပ်ထဲမှာ
သူ (ဦးဘဂျမ်း) က ဒီလိုရေးခဲ့တယ်
“ရိုးသားမှုသာ ချစ်စရာ” တဲ့
သူ့သူငယ်ချင်း မောင်စွမ်းရည်ရဲ့ “ဘာလဲဟဲ့” စာအုပ်ထွက်တယ်
အဲဒီညက ဆောင်းတွင်း၊ ဇန်န၀ါရီလ မိုးအကြီးအကျယ်ရွာတယ်
သူ (ကိုဘဂျမ်း) ရော
စိတ်ချလက်ချ အိပ်ပျော်နိုင်ပါ့လား။ ။
စနေရဲ့ကျောကုန်းမှာ ပစ်တင်ထားတဲ့ ကဗျာကိုပဲ
ရှင်ကြီးဂေါတမလည်း ဖြစ်ဖို့အတွက် ဖြတ်ခဲ့ရတာပဲ။
ငါအရေးနိမ့်ပြီလို့ တွေးခဲ့မိရင် …။
တံခါးကို ခေါက်လော့ ပွင့်လိမ့်မယ်
လမ်းမလျှောက်သူ ဘယ်ကိုမှမရောက်ဘူး။ ။
ရုပ်ကိုက ဘုရားပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ …
(ဤကဗျာဖြင့် ၂၂-၁-၂၀၀၇ နေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သော
ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင် ကဗျာဆရာကြီးတင်မိုးအား ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြုပါသည်။)
အမှောင်တ၀က် ကိုယ်စီလင်းလက်ကြ …
သူနဲ့ သူ့ပြည်သူရင်ဗဟိုမှာ ရောက်ခဲ့ပေါ့
ငတို့ရင်ဗဟိုမှာ ရောက်ခဲ့ပေါ့ …
သူ့နာမကို ရွတ်ဆို ဟစ်ကြွေးကြ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြည်သူတွေရဲ့ ချစ်သူအတွက်
ဆာရီဝတ်ရုံအောက်က တိုးထွက်လာခဲ့တာ …
အခုလို ခန်းမ၀ရံတာက သူ့ချစ်သူတွေကို
ငတို့ချစ်သူတွေအတွက် ရှိုက်သံ …
ကောင်းကင်ယံအထိ ထိုးတက်သွားတယ် …။ ။
(၂၀၀၆ နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရင် မစ္စတာယူနွတ်စ်အား ဆုပေးပွဲအပြီး ရေးဖွဲ့ပါသည်။)
* Fredpris = ငြိမ်းချမ်းရေးဆု (နော်ဝေဘာသာဖြင့်)
** သီဂွန်ဒုံး = ဗီယက်နမ် ရက်ဖ်တို နော်ဝေလူ့အခွင့်အရေးဆုရှင် (၂၀၀၆)
ကန်သုံးဆင့် - ပုသိမ်မြို့မှ ကန်ညီနောင်သုံးဖော်
ပိပြားခဲ့ကြရ တို့ပြည်သူ …။
(မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် အသက်၊ ဘ၀၊ သွေးချွေးတို့ဖြင့် ရင်းနှီးရယူပေးခဲ့ကြသော သူရဲကောင်းတို့အား ဤကဗျာဖြင့် ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြုပါသည်။)
အသားစတွေ ... မြိုချခဲ့ရ
စစ်တောင်း ... မြေပျိုမှာ
မီးပုံဖိုလို့ ... ကြိုဆိုခဲ့ကြ
မဖွားမီ ... ညက
တချို့ဖြင့် ... ပုခက်ကစီးလို့
မီးပုံလေးနဲ့ ... မနီးမဝေးမှာ
အေကေ** တလက် ... ပွေ့ဖက်ရင်း
ထာဝရအိမ်တွေ ... အတွက်
တောင်းဆုပန်ခြင်းတွေ ... ထွေးယှက်
ညီမျှခြင်း ... နေ့ရက်တွေဆီ
ပြန်ချင်တယ် ...။ ။
(၁၉၉၂ ခုနှစ် မကဒတ၏ စစ်တောင်းမြစ်အနောက်ဘက်
** AK 47 မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်
ကမ္ဘာလည်မယ့် … နေ့
ငါ … အိမ်ပြန်မရသေးဘူး
တကယ်ကို ပြန်မရောက်သေးပါလား …
ကျပ် (kyat) ကို အိပ်မက်မမက်တော့ဘူး
ဘတ် (baht) ကို အိပ်မက်မက်ရတာလည်း
NGOs ရဲ့ ကျေးဇူးတော်
ကြည့် … ကလေးရေ
ပေါလောမျောနေတုန်းပဲကွဲ့ …..။ ။
စစ်အုပ်စုက တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေးဆိုတာကို အော်ရသူတွေ ရင်ကွဲမတတ်။ ကြားရသူအပေါင်းလည်း နားကွဲမတတ် ထုတ်လွှင့်နေသည်။ တကယ်တော့ အဲသည်လို အော်ချည်း နေဖို့မလိုပါ။ အလုပ်နှင့်သက်သေပြရန်သာဖြစ်ပါသည်။
ပြည်သူတွေက အစိုးရအပေါ် မယုံကြည်တော့သည့်စိတ်၊ အားမကိုးကြတော့သည့်စိတ် နာကျည်း မုန်းတီးသည့်စိတ်၊ ရွံရှာစက်ဆုပ်သည့်စိတ်များ တနေ့တခြားတိုးပွားများပြားလာနေသည်။ နှစ်ဦး နှစ်ဘက်လုံးအတွက် ဤမနှစ်မြို့ဖွယ်ရာ စိတ်ခံစားမှုကို ဖျောက်ဖျက် ဆေးကြောနိုင်ရန် စစ်အုပ်စုမှ သက်သေပြရန် အချိန်ကောင်း၊ အခွင့်ကောင်းတခုကို အသုံးချသင့်နေပြီဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း အမှန်ပင် ချစ်ခင်စည်းလုံးစေချင်လျှင် ရွာပုန်းရွာရှောင်ဘ၀နှင့် တဘ၀လုံး (တချို့ဆိုလျှင် မျိုးရိုးစဉ်ဆက်) ပြေးလွှားနေရသည့် တောင်ပေါ်သားများအား အခြေတကျ မြေသတ် မှတ်ပေးသင့်နေပါပြီ။ သူတို့ရိုးရာ တောင်ယာလုပ်ငန်းများကို မြေအတည်တကျနှင့် စိုက်ပျိုးရာတွင် ခေတ်မီနည်းစနစ်များနှင့် ထောက်ပံ့ကူညီသင့်နေပါပြီ။ သည်လိုဆိုလျှင် တိုင်းပြည်အတွက် စားစရိတ် မြင့်တက်မှုများလျှော့ပါးစေလျှက် ကမ္ဘာ့သတင်းရပ်ကွက်မှာ မြန်မာ့သတင်းများနှင့် ပတ်သက် ရေးသားတိုင်း အလွန်အကျည်းတန်သည့် ထိုရွာပုန်းရွာရှောင်ဆိုသောစကားလုံးတို့ ပျောက်ကွယ် သွားပါလိမ့်မည်။
ဘယ်အခါမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုငယ်လေးများ၏ တန်းတူအခွင့်အရေး တောင်းဆိုမှုများ ဆိတ်ငြိမ်သွားစေလိုလျှင် တောင်းဆိုသံများကို ကျည်ဆံနှင့် ဟန့်တား ပိတ်ဆို့နေမည့်အစား ကျောသားရင်သားမခွဲခြားသော စိတ်ထားမျိုးကို ပြသင့်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးရေးကောင်းမွန်စေမည့် မြေဆီလွှာတွေနှင့်တကွ ရေချိုလည်းအလျှံပယ်ပေါများသည့်အတွက် ထမင်းငတ် သေသောမသာဟူ၍ မရှိနိုင်ဟု ကျမအခိုင်အမာတွေးထင်ခဲ့မှုသည် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းတခုအတွင်းသို့ ရောက်လာသည့် လူနာတဦးကို သွားကြည့်မိစဉ်ခဏမှာ ထိုအတွေး မှားယွင်းကြောင်း သိလိုက်ရပါသည်။
အသက်သုံးဆယ်ကျော် ကရင်တိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးတယောက် သူ့အသက်ကိုသာမသိရလျှင် အသက်ခြောက်ဆယ်ခန့်ဟုသာ လူတိုင်းထင်နေကြလေသည်။ သူ့အရည်အသားများက မွဲပြာ မဲခြောက်လျှက်။ ဖျားနေသည်မှာ နှစ်နှစ်ရှိပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့တာ (၃) လကျော်ပြီဟု သိရသည်။ သူမသည် ကြာအင်း၊ ၀င်းရေးစသည့် စစ်ရင်ပြင်ဖြစ်နေသည့် ကရင့်မြေမှ တောင်ကို ကျော်ကာ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်း ဆေးခန်းသို့ အခမဲ့ဆေးကုသမှု ခံယူနိုင် ရန်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျမတို့အိမ်တန်းနား အရောက်တွင် သူမ ဆက်မလျှောက်နိုင်တော့ဘဲ လဲကျသွားခဲ့သည်။ သူမ နောက်က အဖော်လိုက်လာသူဟူ၍ လူမမည်ကလေးတယောက်ကို ကျောပိုးထားသည့် ဗမာ စကားမပြောတတ်သော သူမသမီးတဦးသာလျှင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ယခင်ကျောင်းသား
တပ်မတော်မှ တပ်မှူးဟောင်းတယောက်နှင့် အခြားအဖော်တယောက်တို့က စောင်ဖြင့်ထမ်းကာ ဆေးရုံသို့ လိုက်ပို့လိုက်ရသည်။
ရက်အနည်းငယ်အတွင်း နောက်ထပ်နှစ်ယောက် ထပ်ရောက်လာသည်မှာလည်း သူမနှင့် ထူးမခြား နားသည့် အာဟာရပြတ်လပ်နေသည့် အမျိုးသမီးများသာဖြစ်လျှက် ဆေးရုံက သူမတို့သုံးယောက်
အား “သရီးလေဒီးစ်” ဟုခေါ်သည်။ သူတို့သုံးယောက်ပေါင်းမှ အမျိုးသမီးတယောက်၏ ပုံမှန် အလေးချိန်မျှသာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သူတို့အား ဆေးရုံမှ နွားနို့တိုက်သောအခါ သူတို့မသောက်တတ်ကြဘူးဆိုသည့်စကားက ကြားရသူ အပေါင်း၏ ရင်ကို နာကျင်စေခဲ့တာ ကျမတို့တိုင်းပြည်က လူမျိုးစုများ၏ ဖြစ်ရပ်မှန်များအနက်က တခုမျှသာဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်က ကိတ်မုန့်ကိုဘာမှန်းမသိသော တခါကြားယုံမျှဖြင့် ကိတ်မုန့် ဟူသောအမည်နာမကို နောက်တခါ ပြန်မပြောတတ်သော ချင်းမလေးတယောက်ကို မှတ်မိ နေသည့်နာကျင်မှုမျိုးဖြင့် ထိုသရီးလေဒီးစ်ကိုလည်း ကျမ မေ့နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
အာဖရိကမှ သဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးဒဏ်ကိုခံနေရသည့် တိုင်းပြည်များမှ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တို့သည် မိမိတိုင်းသူ ပြည်သားများအတွက် နိုင်ငံတကာအကူအညီများကို မရှက်မကြောက် တောင်းခံလျှက် ပြည်သူတို့၏၀မ်းကို ပြည့်အောင်တတ်နိုင်သမျှဖြည့်စွမ်းခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတကာက ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကူအညီပေးလိုသည့် အစိုးရမဟုတ်
သော အဖွဲ့အစည်းများ အဆင်သင့်ရှိနေသည့်တိုင် အုပ်ချုပ်မင်းမူနေသည့်အစိုးရ၏ မယုံသင်္ကာ ဖြစ်မှုများ။ အကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှုများကြောင့် ပြည်သူများ၏ ရပိုင်ခွင့်များ ဆုံးရှုံးနစ်နာနေလျှက် တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အလွန်ပင်အန္တရာယ်ကြီးလှသော အခြေအနေ မျိုးတွင် ရောက်နေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခေတ်အဆက်ဆက် အာဏာလွှဲပြောင်းသိမ်းပိုက်ခဲ့သည့် စစ်အစိုးရ၏ စကားအတိုင်း ဆိုရပါသော်- ကျမတို့တိုင်းပြည်၏ ကံကြမ္မာမှာ ချောက်ထဲကျရန် အမှန်ပင် လက်နှစ်လုံးမျှသာ လိုတော့ပါသည်။
အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်သည့်တိုင်အောင် အနားမရသောလက်များ သန်းပေါင်းများစွာရှိနေပါသည်။ အထက်တန်း ကျောင်းအုပ်ဘ၀တွင် စစ်အုပ်စုမှ ပင်စင်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသည့် ကျမအဖေသည် ကျောင်း ဆရာဘ၀က လူငယ်များအား ဆေးလိပ်မသောက်၊ ကွမ်းမစားရန် တင်းကျပ်သော အမိန့်များထုတ်
ကာ ပိတ်ပင်ခဲ့သော်လည်း အလုပ်မှ ရပ်စဲခံရပြီးသည့်နောက်တွင် သူကိုယ်တိုင်ပင် ဆေးလိပ်နှင့် ကွမ်းယာကို ၀မ်းရေးအတွက် လူငယ်လေးများအား သူကိုယ်တိုင်ရောင်းချပေးနေခဲ့ရပါသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်က ဒုက္ခသည်စခန်းထဲတွင် ဒုက္ခသည်များအား ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ သကြား၊ ပဲ၊ လောင်စာ မီးသွေးတောင့် စသည်ဖြင့် ကုန်မာများကို လစဉ်ထုတ်ပေးနေပါသည်။ သို့သော် ဆောင်းနံနက်ခင်းတခု၏ နေရောင်အောက်ဝယ် နေစာလှုံရင်း မီးသွေးမှုန့်များကို ထမင်းရည် ပျစ်ပျစ်နှင့်ရောဆုပ်ကာ လောင်စာ ဖန်တီးနေရသေးသော အသက်ရှစ်ဆယ်နီးပါး ကရင် အဖွားအိုများကို ကျမတွေ့ခဲ့ရသောအခါ ဆရာကြီး ဦးတင်မိုး ကျမတို့မိုးကြိုးသတင်းဌာနသို့ လာရောက်လည်ပတ်စဉ် ပြောခဲ့သောစကားများကို တလုံးမကျန်သတိရလာပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပြန်ပါသည်။
“သူတို့တိုင်းပြည် (အမေရိကန်) က လူထုကိုစောင့်ရှောက်တာ တာဝန်ကျေလွန်းအားကြီးလို့ ဆဲတောင်ဆဲချင်လာတယ်။ အသက် ခြောက်ဆယ်ကျော်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပိုက်ဆံ (၂၀၀) လည်း တန်းပေးတယ်။ အဘ အသက်ကြီးနေပြီ။ အဘကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ နာ့စ်တယောက် အဘအတွက် ထားပေးမယ်လို့လည်းပြောသေးတယ်။ ငါ့အတွက် လူအကူမလိုသေးပါဘူး။ ငါ သွားနိုင်လာနိုင် ပါသေးတယ်ဆိုတာ ငါကိုယ်တိုင်ပြောနေတာတောင်မှ သူတို့က ငါ့အတွက်စိတ်ပူပေးနေလို့
ထိုစကားများကို ဆရာကြီးက ပြီးပြည့်စုံနေသော ကျေနပ်နှစ်သက်မှုတို့ဖြင့် ပါးစုံ့ကြီးများ ထွက်လာ သည်အထိ ပြုံးလျှက် ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။
ကျမတို့တိုင်းပြည်က ကျမတို့၏ စစ်အစိုးရကိုလည်း ကျမတို့ပြည်သူလူထုက ထိုသို့သော
အပြုံးမျိုးဖြင့် ၀ိုင်း၍ ဆဲလိုက်ချင်စမ်းလှသည်။
သစ်သီးကလေးတလုံး ကြွေကျလာသည်။ မြေကမ္ဘာ ပေါ်သို့ သစ်သီးကလေးတလုံး ကြွေကျလာသည်။ နောက်ထပ် သစ်သီးကလေးတလုံး ကြွေကျလာသည်။ မြေကမ္ဘာပေါ်သို့ သစ်သီးကလေးတလုံး ကြွေကျ လာပြန်သည်။ နောက်ထပ် …… ပြီးတော့ နောက်ထပ် … မြေကမ္ဘာပေါ်သို့ သစ်သီးကလေးတွေ ကြွေနေကြသည်။
သစ်သီးတို့ ရင့်မှည့်လာလျှင် မိခင်ပင်စည်မှဖြစ်စေ၊
ရိုးတံညှာမှဖြစ်စေ စွန့်ခွာကြွေသက်ရသည်မှာ လောကဓမ္မတာပင်ဖြစ်သည်။ ဆွဲငင်အားရှိသော မြေကမ္ဘာပေါ်သို့ ရင့်မှည့်သစ်သီးတို့ ကြွေကျဆင်းသက် လျက်ရှိသည်။ သစ်သီးကလေးတို့၏မိခင်သည် သစ်ပင်ဖြစ်လျှင် သစ်ပင်၏မိခင်သည် ကမ္ဘာမြေဖြစ်သည်။ ပင်စည်၊ ရိုးတံ၊ အရွက်၊ အပွင့် အသီးတို့၏ အမေသည် မြေကမ္ဘာပင်ဖြစ်သည်။ ရင့်မှည့်ကုန်ကြသော သစ်သီးကလေးတွေ မိခင်မြေကမ္ဘာပေါ် ကြွေနေကြသည်။
ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေသော၊ ဗလာဖြစ်နေသော၊ အရောင်မဲ့နေသော ပိတ်ကား သို့မဟုတ် ကင်းဗတ်စပေါ်သို့ ပန်းချီဆရာ၏ဆေးစက်တစက်၊ စုတ်ချက်တချက် ကျလာသကဲ့သို့ မြေကမ္ဘာပေါ်သို့ သစ်သီးကလေးတလုံး ကြွေကျလာသည်။ နို့နှစ်ရောင်ခလုပ်ကလေးများပေါ်သို့ တို့ထိလိုက်သော စန္ဒယားဆရာ၏ လက်ချောင်းများမှ ပေါ်ထွက်လာသည့် ဂီတသံကလေးပမာ သစ်သီးကလေးတလုံး ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ ကြွေကျလာသည်။
ကြွေသောသစ်သီးကလေးများမှ အမြုတေသစ်စေ့ကလေးများကို မိခင်မြေကမ္ဘာက သူ့ရင်ထဲထည့်၍ လက်ခံ သိုမှီးလိုက်သည်။ မကြာမီ သစ်စေ့ကလေးသည် စိမ်းမြနုကြွသောအဆင်းသို့ ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်စဉ်အရ သစ်ပင်တပင်အဖြစ် မွေးဖွားဖြစ်တည်ရှင်သန် ထိုမှတဖန် အခက်အလက်၊ အရိုးအရွက်၊ အငုံ၊ အပွင့်၊ အသီး အဆင့်ဆင့်ဖြစ်တည်ကာ ရင့်မှည့်လာကုန်သော သစ်သီးတို့ မိခင်မြေကမ္ဘာပေါ် ကြွေကျသက်ဆင်းကြပြန်သည်။
ငယ်ဘ၀ အမေ့အိမ်၏ ပုဏ္ဍရိပ်စည်းရိုးကလေးအတွင်း မာလကာပင်ကလေးတပင်ရှိခဲ့သည်။ မာလကာပင်ကလေးသည် ကျနော်တို့ ကလေးများအဖို့ ဆော့ကစားဘက်၊ အရိပ်ခိုသောနေရာ၊ အသီးစားရသော အဆွေခင်ပွန်းအဖြစ် နှစ်ကာလများကို ရင်းနှီးခင်မင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြသည်။ တခါတလေ အမေသည် မာလကာ ရွက်နုကလေးများကို ခူးဆွတ်ကာ လက်ချောင်းဖြင့်ပွတ်ချေရင်း ရှူနေတတ်သည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ဖူးသည်။
မူးမူးမော်မော်ဖြစ်လျှင် အမေသည် မာလကာရွက်နုများကို ခူး၍ရှူတတ်သည်။ ကျနော်တို့ကလေးများ ကလည်း အတုခိုးကာ မာလကာရွက်နုကလေးများကို လူကြီးများအလစ်တွင် ခိုး၍ရှူကြသည်။ အနံ့မှာ မွှေးမြမြ၊ အသီးကိုမူ သွားရေစာအဖြစ် ခူးဆွတ်စားကြသည်။ အမေနှင့်လူကြီးများက ကျနော်တို့ မာလကာသီး ခူးစားနေသည်ကို တွေ့လျှင် အသီးများကို လက်နှင့်ဆိတ်ကြည့်သည်။ ပွသောအသီး (သို့မဟုတ်) မှည့်သောအသီးဖြစ်နေမှ စားခိုင်းသည်။ စား၍မသင့်သော အသီးနုနုများဆိုလျှင် မစားသင့်ကြောင်း၊ ရင်ကြပ်တတ်ကြောင်းပြော၍ လွှင့်ပစ်သည်။ တကြိမ်တွင် လူကြီးများမသိအောင် ငတ်ငတ်နှင့် မာလကာသီးနုနုများကိုခိုးပြီး ခူးစားမိသည်။ အအေးဓာတ် ၀င်လာသော ညအချိန်တွင် ချောင်းတဟွတ်ဟွတ်ဆိုးကာ ရင်ကြပ်တော့သည်။ တညလုံးအိပ်မရ။ အမေက ဆူသည်။ နောက်တော့ မာလကာသီးနုနုများကို မစားရဲတော့၊ တခါတည်းမှတ်သွားသည်။ တနေ့တွင် မာလကာသီးတလုံးကို အမှည့်ထင်၍ ခူးလိုက်သည်။ အရောင်က ၀ါဖန့်ဖန့်နှင့် အခွံမှာပျော့နေသည်။ ထို့ကြောင့် မှည့်ပြီ အထင်နှင့် စားမိလိုက်သည်။ ပထမတကိုက်တွင် ဘာမှအရသာမရှိ။ ချိုဖို့ဆိုသည်ကား ဝေလာဝေး။ အမေ့ကိုသွားပြတော့ မစားသင့်ကြောင်းပြောကာ လွှင့်ပစ်လိုက်သည်။ ဘာလို့မစားသင့်ကြောင်း အမေးအမြန်းထူသောအခါ အမေက “မှတ်ထား… အဲဒါ နုမှည့်လို့ခေါ်တယ်။ အရသာမရှိဘူး။ စားရင် အန္တရာယ်ဖြစ်တတ်တယ်” ဟုပြောသည်။ ထိုစဉ်က နုမှည့်ဆိုသည်ကို ကျနော်အသေအချာ နားမလည်နိုင်ခဲ့ပါ။
ဘ၀၏အတွေ့အကြုံများစွာကို ဖြတ်သန်းရင်း နုမှည့်ဆိုသည်ကို တစစနှင့် နားလည်လာခဲ့သည်။ စင်စစ် နုမှည့်ဆိုသည်မှာ ရှင်သယောင်နှင့် သေသောအသီးဖြစ်သည်။ လိုအပ်သောအချက်အလက်တို့ကို ပြည့်စုံစွာသိုမှီးရင်း တဆင့်ချင်း တရစ်ချင်း ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲကာ အသစ်အသစ်သို့ အရည်အချင်းအရ တော်လှန်ပြောင်းလဲရသော သဘာဝတ္တ တရားနှင့် ကင်းလွတ်ပြီး အရှင်မွေး နေ့ချင်းကြီးသဘော ဖြစ်သည်။ ရင့်မှည့်ယောင်နှင့် နုပျက်ဖြစ်ရသည်။ နုမှည့်မှည့်သစ်သီးသည် မျိုးဆက်လည်းမပျံ့ပွား၊ စားသုံးလျှင်လည်း ဘေးဥပါဒ်ဖြစ်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။
နုမှည့်သည် သစ်သီးတွင်သာရှိသည်မဟုတ်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ကဏ္ဍစုံတွင်လည်း နုမှည့်များရှိနိုင်သည်၊ ရှိနေကြသည်။ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ အနုပညာ၊ လောကဓာတ်ပညာရှင်များ စသည်ဖြင့် နေရာစုံ၊ အဖွဲ့အစည်းစုံတွင် လူနုမှည့်များရှိနိုင်သည်။ နုမှည့်သည် အသက်ငယ်ခြင်း၊ အသက်ကြီးခြင်းနှင့် မဆိုင်၊ အရွယ်မရွေး နုမှည့်ဖြစ်နိုင်သည်။ တချို့အသက်ကြီးလို့သွားသည်၊ အတွေးအခေါ် အကျင့် အကြံမှာ လူငယ်မကျ၊ လူကြီးမမည် ဖြစ်နေကြသည်။ အများအကျိုးမပြောနှင့် မိမိအနာဂတ်ကိုပါ နာမည်ဆိုးဖြင့် မြှုပ်နှံသင်္ဂြိုဟ်နေကြသည်။ လက်တွေ့မရှိဘဲ စာတွေ့အကဲဒမစ်ဖြစ်ကာ အလုံးစုံသိသော ပညာရှင်ဟန်ဆောင်ကြသည်။ ယုတ္တိဗေဒကို ဆန္ဒစွဲဖြင့် ရေလဲသုံးကာ နတ်နေကိုင်းပါမချန် အနှစ်မဲ့
ဝေဖန်ရေးဓားဖြင့်ချိုင်သည်။ ထိုရောအခါ နိုင်ငံတော်ပလ္လင်ထက်မှ အနှစ်မဲ့စစ်ခွေးတို့ နှလုံးပီတိ ဂွမ်းဆီထိကာ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြသည်။ နုမှည့်များလေ သူတို့၏ အာဏာသက်ရှည်နိုင်လေဟု ထင်မှတ်နေသည်မဟုတ်လား။
မီးလောင်တောင်ယာမြေမှ တမျှော်တခေါ် အလေ့ကျ ပုတက်စာပင်ကလေးများမှာ ကြည့်ရသူအဖို့ မျက်စိပသာဒလည်းဖြစ် ဟင်းလျာအဖြစ်လည်း စားသုံးနိုင်သည်။ သို့သော် နုမှည့်သစ်သီးသည်ကား စားမရ၊ စိုက်မရ၊ ပျိုးမရ၊ ထိန်းသိမ်းသိုမှီးထားသော်ငြား သူ့အနာဂတ်သည်မလှ။
သစ်သီးကလေးတွေကြွေနေသည်။ ရင့်မှည့်နေသော သစ်သီးကလေးတို့သည် မြေကမ္ဘာ၏ရင်ခွင်ထဲသို့ ကြွေကျ ဆင်းသက်ရင်း အသစ်အသစ်သော သစ်ပင်တွေအဖြစ် မွေးဖွားဖြစ်တည်နေကြသည်။ မြေကမ္ဘာပေါ်သို့ ရင့်မှည့်နေသော သစ်သီးကလေးတို့ ကြွေနေကြသည်။ ထို့အတူ နုမှည့်သစ်သီး တို့လည်း ရော၍ကြွေနေကြသည်။ သို့သော် နုမှည့်သစ်သီးတို့သည်ကား ….။ ။
အချိန်က - လူဝတ်လဲထားတဲ့ စစ်အာဏာရှင် လက်အောက် ကျနော်တို့ ကျရောက်နေတဲ့ အချိန်
နေရာက - ၃၃ လမ်း၊ ရွှေကြည်အေး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ ရန်ကုန်
ဆရာ့ကို မိတ်ဆွေကဗျာဆရာ စာရေးဆရာ ကြီးငယ်တွေနဲ့ စကားစမြည်ပြောဆိုနေတာ ကို မကြာခဏ တွေ့တွေ့နေရတယ်နော် ဆရာ၊ ဆရာတို့က တ၀ိုင်း ကျနော်တို့လူငယ် ကဗျာရေးသမားတွေကတ၀ိုင်း ခပ်လှမ်း လှမ်းက လှမ်းပြီး လေးစားကြည်ညိုအားကျ ခဲ့တဲ့အချိန်၊ “ဲဒါ ဆရာတင်မိုးလေ” ဆိုပြီး ကိုယ့်ထက်ပိုပြီး စာပေနယ်နဲ့ရင်းနှီးထိစပ်တဲ့ မိတ်ဆွေတယောက်က ခပ်တိုးတိုး အသိပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ “သြ ဆရာတင်မိုး ကိုး” ဆိုပြီး တငေးတမော ကြည့်လို့အားမရနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်။
ဆရာက တကယ့်ပီဘိ တောသူတောင်သား လူရိုးလူကောင်းကြီးတယောက်ဆိုတာ ထင်းခနဲလင်းခနဲ မြင်သာထင်ရှားပါတယ်။ တိုးတိုးတချို့ ကျယ်ကျယ်တချို့ ပြောလိုက် တဟားဟားရယ်မောလိုက်နဲ့ ဆရာဟာ သိပ်ပြီး ပေါ့ပါးလန်းဆန်းနေပုံပါပဲ။
ကျနော်ဆရာ့ကိုသိတယ်၊ လေးစားချစ်ခင်တယ်။ ကျနော့်ကိုတော့ ဆရာမသိနိုင်ဘူးပေါ့ဆရာရယ်။
စစ်သံ စစ်မာန် စစ်အလံ
အဲဒါ မြန်မာနိုင်ငံ။ ။
အချိန်က - ဆရာတို့ ကျနော်တို့နဲ့ ကျနော်တုိ့ပြည်သူတွေအားလုံး အမျိုးသားဖက်ဆစ်စနစ်အောက် ကျရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့ဆရာရယ်။
နေရာက - ကန်တော်လေး (၁၀၁) လမ်း၊ အိပ်မက်ဖူးမဂ္ဂဇင်းတိုက်၊ ရန်ကုန်
ဆရာနဲ့ ကျနော်တို့ကို အိပ်မက်ဖူးမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာတွေဖြစ်တဲ့ မောင်သာချိုနဲ့ ခင်လွန်းတို့က မိတ်ဆက် ပေးတော့ ဆရာက ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ အားရ၀မ်းသာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကျနော်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူ ရပါတယ် ဆရာရယ်။ ကျနော်တို့ငယ်ငယ်က ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ကဗျာလေးတွေ ရေးစပ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာ ဆရာကြီး၊ ကျနော်လေးစားကြည်ညို ခင်မင်ချစ်ခင်တဲ့ ကဗျာဆရာကြီးနဲ့ သိကျွမ်းခင်မင်ရပြီမဟုတ်လား ဆရာ။
အဲဒီတုန်းက ဆရာနဲ့ အခြားဆရာကြီးတချို့ ပါလာသေးပေမယ့် ကွယ်လွန်သူ ဆရာလင်းယုန်မောင်မောင် တယောက်ကိုပဲ ကျနော်အမှတ်ရတော့တယ်ဆရာ။ အဲဒီအချိန်က ကျနော့်မှာလည်း ကျနော့်အရေးနဲ့ ကျနော်၊ ကျနော့်သောကနဲ့ ကျနော် ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်လေ။ ဆရာနဲ့ ပထမဦးဆုံးသိကျွမ်းမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ အမှတ်ရစရာလေးတခုလည်း ဖြစ်ခဲ့ရတယ်နော် ဆရာ။ အဲဒီအချိန်မှာ အိပ်မက်ဖူးမဂ္ဂဇင်းမှာ နေ့ရောညပါလာပြီး ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေတဲ့ ကဗျာဆရာ နေဇော်နိုင်ကလေးလည်း ရှိနေတယ်လေဆရာ။ ဆရာတို့တိုက်ပေါ်မှာရှိနေတုန်း သူက အောက်ထပ်ကပြေးတက်လာပြီး ကျနော့်ကို မျက်ရိပ်မျက်ခြည်ပြ တိုက်ခန်းနောက်ဘက်ခေါ်ပြီး “ဆရာဂျမ်းကိုပဲလား အစ်ကိုတို့ကိုပဲလားတော့ မသိဘူး၊ အောက်မှာတော့
MI တွေလာပြီး စောင့်ကြည့်နေပြီအစ်ကို” လို့ လာပြီး အထိတ်တလန့် သတိပေးခဲ့တယ် ဆရာ။ သူက စစ်သားလူထွက်ဆိုတော့ လူတွေရဲ့ပုံပန်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ သိနေတာပေါ့ဆရာရယ်။ ဆရာတို့လူကြီး တွေကတော့ ပြောလားဆိုလား ရယ်လားမောလားဆိုတော့ သတိတောင်ထားမိပုံမရပါဘူး။ နောက်ဘာမှ သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ကျနော်က ဆိပ်ဖလူးနံ့သင်းပျံတဲ့ ဘ၀တက္ကသိုလ်ကို ရောက်သွားခဲ့ရတော့ ဆရာနဲ့ နောက်ထပ်ဆုံစည်းခွင့်မရခဲ့တော့ဘဲ ဆရာ့ရဲ့တက်ကြွတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းတွေ၊ ကဗျာ သီချင်းတွေနဲ့ လူထုကြားဆင်းပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အောင်ပွဲရရေးအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော် မှုတွေကိုပဲ တဆင့်စကား တဆင့်နားနဲ့ပဲ ကြားသိခွင့်ရခဲ့တော့တယ်ဆရာ။ ဆရာနဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက် ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာတွေရဲ့ မှန်ကန်ရဲရင့်တဲ့ရပ်တည်ချက်နဲ့ အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်တွေရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေအတွက် ကျနော်တို့ မမြင်ကွယ်ရာကဘဲ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျနော် ဆရာ့ရဲ့ ကဗျာရွတ်သံကို စိတ်ထဲကကြားယောင်ရင်း တကယ်ပဲလွမ်းခဲ့ရပါတယ် ဆရာ။
အချိန်က - ၂၀၀၆ ခု၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက် မြန်မာပြည်ကျရောက်နေဆဲ
နေရာက - ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်တိုက်၊ ဘင်းခင်း၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ
ကျနော်ထင်တာထက် ဆရာပိုပြီး ၀ဖြိုးလာသလို လှုပ်ရှားမှုတွေလေးလံနေသလိုပဲ၊ ကျနော့်ကိုလည်း ပြန်ပြောမှ တစွန်းတစပြန်အမှတ်ရသွားပြီး ပြုံးနေကျအပြုံးနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး “၀မ်းသာတယ်ဗျာ၊
၀မ်းသာတယ်” လို့ တဖွဖွပြောနေခဲ့တယ်။ ဆရာက ကျနော်တို့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်း ဖြစ်ပုံတွေကိုိုပြန်ပြောပြ။ နောက် သူ့ရဲ့ ဆိပ်ဖလူးရနံ့ကာလနဲ့ ကျနော့်ရဲ့ဆိပ်ဖလူးရနံ့ကာလ အတွေ့အကြုံတွေ ဆုံခဲ့ရသူ တွေကို အပြန်အလှန် ကြေကွဲဆွတ်ပျံ့ကြ၊ နောက် ဆရာ့ရဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားအတွေ့အကြုံ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှု၊ စာပေဟောပြောပွဲတွေအကြောင်း၊ တော်လှန်တိုးတက်သူတွေ ဖောက်ပြန်သူတွေအကြောင်း၊ နယ်စပ်ဒေသ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအပေါ်ထားရှိတဲ့ ဆရာ့ရဲ့သံယောဇဉ်နဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို စီးကရက်တွေ တလိပ်ပြီးတလိပ်ဖွာရှိုက်ရင်း အားပါးတရပြန်ပြောပြနေတဲ့ ဆရာ့ရဲ့ပုံရိပ်လွှာဟာ ကျနော့် မျက်စိထဲမှာ ထင်ထင်ရှားရှား စွဲမြဲနေတုန်းပါပဲ ဆရာရယ်။
ဖူးငုံလဲရှိ ဆူးချုံလဲရှိ။ ။
(၁၁၊ ဧပြီ၊ ၁၉၉၉)
မှန်ပါတယ်ဆရာ။ ဆရာ့ရဲ့ကဗျာလေးက ပီပီသသ၊ ထိထိရှရှ ရှိလှပါရဲ့။ ကျနော်ကတော့ ဆရာ့ရဲ့လှည်း ထဲမှာ ခရီးသည်အဖြစ် ဆက်ပြီးစီးနင်းလို့ နေတုန်းပေါ့ဆရာ။ ဒါပေမယ့် တနေ့နေ့မှာတော့ အမိနိုင်ငံပြန်ရ မယ်လို့ ဆရာယုံကြည်ခဲ့တယ်နော်။
ပထမ အမေ လွတ်လပ်ရမည်။
မာစေ သာစေ တို့အမေဟု
ယုံကြည်ပါလေ အမေရေ …။ ။
(၁၁၊ စက်တင်ဘာ၊၁၉၉၉၊ ဥရောပ တလပြည့်)
ဆရာရေ အခုတော့ ဆရာသိပ်ချစ်ခဲ့တဲ့ အမိနိုင်ငံကို ဆရာမပြန်နိုင်ဘဲ ရေခြားမြေခြားမှာ ဆရာကြွေလွင့် ခဲ့ရပြီ။ လူဆိုတာသေမျိုးမို့ မဆန်းလှပေမယ့် ဆရာ့လို တိုင်းပြည်သားကောင်းရတနာ ကဗျာစာဆို တော်လှန်ရဲဝံ့သူတယောက်ကို မသေစေချင်သေးဘူးဆရာ။ နှမြောတသကြေကွဲရ လွမ်းရပါတယ်ဆရာ။ ဒါပေမယ့် …
(၂၇၊ မတ်၊ ၁၉၉၉)
ဆရာက လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခင်ပွန်း မစ္စတာမိုက်ကယ်အဲရစ် ကွယ်လွန်တဲ့ အကြောင်းကြားပြီး ဒေါမနဿနဲ့ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးလေဆရာ။ ခု ဆရာရဲ့ အဲဒီကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီး ကျနော်လည်း ဒေါမနဿ ဖြစ်ရပြန်ပါပြီဆရာ။ ကျနော်တို့အားလုံးဟာ ဆရာပြောတဲ့ မီးဟုန်းဟုန်း ကျွမ်းနေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲကနေ ဖီးနစ်ငှက်တွေလို ရှင်သန်ပျံတက်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ဆရာ့ကို ထာဝရ လွမ်းနေကြမှာပါ။ ။
(ဤစာဖြင့် ကွယ်လွန်သူ တော်လှန်ကဗျာစာဆိုကြီး တင်မိုး (ဦးဘဂျမ်း) အား ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ပါသည်)
ကျနော် ကလေးဘ၀ သိတတ်စအချိန်တွင် လွတ်လပ်ရေးနေ့ကို စတင်တွေ့ထိခဲ့ရပါသည်။ မုန့်စားပြေးပြိုင်ပွဲ၊ ဂုန်အိပ်စွပ်ပြေးပြိုင်ပွဲများကို
၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားရသည်၊ ကျနော့်ထက်ကြီးသော ကိုကို၊ မမတို့ကတော့ ရေအိုးရွက်ပြေးပြိုင်ပွဲ၊ မျက်စိအ၀တ်စည်း သံပုံးရိုက်ပြိုင်ပွဲ စသည်တို့ကို ဆင်နွှဲရပါသည်၊ ကျနော်လည်း ကိုကိုတို့ အရွယ်ရောက်သောအခါ ထိုကစားပွဲများ၌ ရယ်မောပျော်ရွှင် ပါဝင်ခွင့် ရလာပါသည်။ အစ်ကိုကြီးများ၊ ဦးလေးများက တော့ ချောတိုင်တက်ပွဲ၊ ခေါင်းအုံးရိုက်ပြိုင်ပွဲများ ကို တပျော်တပါး ဆင်နွှဲကြပါသည်။
ဇန်န၀ါရီ (၄) ရက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုသည်မှာ ကစားနည်းမျိုးစုံကစားရ၊ မုန့်မျိုးစုံစားရပြီး လွတ်လပ်စွာရယ်မော ပျော်ရွှင်သော နေ့တနေ့အဖြစ်သာ စွဲမှတ်ခဲ့မိပါသည်၊ ထိုရက်ကို လွန်မြောက်သွားသောအခါ ကလေးတို့ထုံးစံအတိုင်း အခြားအရေးကြီး သို့မဟုတ် ဦးစားပေး ကစားခုန်စားမှုများတွင် နစ်မျောသွားခဲ့ပြန်ပါသည်။ ထို့အပြင် စိတ်ညပစ်စရာကောင်းလှသော စားသင်ရခြင်းနှင့် စာကျက်ရခြင်းတို့ကိုလည်း မပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းရပါသေးသည်၊ အဆော့လွန်၍ မိဘများ၏ ဆဲဆိုငေါက်ငန်းမှုမှသည် ရိုက်နှက်ကန်ကျောက်မှုအဆုံး မျက်ရည်နှင့် ရင်ဆိုင်ရခြင်းမှာလည်း မဆန်းလှ။ စင်စစ် ကလေးဘ၀သည် သီချင်းထဲကလို လုံးဝအပူအပင်ကင်းတဲ့ဘ၀တော့ မဟုတ်ဟု ယူဆမိပါသည်။
ဤသို့ဖြင့် လွတ်လပ်ရေးနေ့များကို နှစ်စဉ်နှစ်စဉ် ဖြတ်သန်းလာရင်း ထိုတနှစ် တနှစ်စီ၌ မလွတ်လပ်သောနေ့များ ကလည်း အမှတ်ထင်ထင်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်၊ ထိုမှသည် လက်တွေ့လူမှုစီးပွားနယ်ပယ်၌ ကူးခတ်နေရသော ဘ၀များနှင့် တရွေ့ရွေ့ နီးကပ်ယှက်ဖြတ်လာရသလို ရှောင်လွှဲမရသော အထွေထွေသုတအသိပညာတို့ကလည်း ကျနော်၏အတွေးအခေါ်များအပေါ် အရိပ်ထိုးလာခဲ့ပါသည်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက် စီးပွားရေးအဆိုးဆုံးသံသရာတွင်းမှ မိဘများ၏မွန်းကြပ်မှု၊ ရပ်ရွာ
ပတ်ဝန်းကျင်မှ ဆွေမျိုးများ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ၊ အသိအကျွမ်းအရပ်သားများတို့၏ မောဟိုက်မှုများသည် ကလေးဘ၀မှ မလွတ်လပ်ရေးနေ့များကို အရည်အချင်းအရလည်းကောင်း၊ အရေအတွက်အရလည်းကောင်း ပြောင်းလဲ အရောင်ဆိုးပစ်လိုက်ပါသည်။
ဇန်န၀ါရီ (၄) ရက် လွတ်လပ်ရေးနေ့၏ အရိပ်ကို ကျနော့်နှလုံးသားထဲမှ အပြီးအပိုင် ပျောက်ကွယ်သွားစေခဲ့သော (ကျနော့်အတွက်) ပထမဆုံး မလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ၁၉၇၄ ဇွန် (၆) ရက်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာ ခွန်အားစိုက်ထုတ် အလုပ်လုပ်ရသော အလုပ်သမားကြီးများ စားစရာမရှိ၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသည်ကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပစ်သတ်လိုက်ခြင်းအား ကျနော်ကြုံတွေ့ရသည့်အခါ ကျနော့်ဘ၀၌ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ပျောက်ဆုံးသွားပါတော့သည်၊ ဇန်န၀ါရီ (၄) ရက်နေ့သည် မလွတ်လပ်သော လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဖြစ်သွားရပါသည်။
ထိုမှတဖန် နောက်ခြောက်လအကြာ ၁၉၇၄ ဒီဇင်ဘာ (၁၁) ရက်တွင် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာ ဦးသန့်၏ဈာပနကို ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးလျက် စီစဉ်ခင်းကျင်းနေသော ကျောင်းသားများ၊ သံဃာတော်များနှင့် ပြည်သူလူထုများအား အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ပြီး ထောင်သွင်းအကျဉ်းချ၊ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ပြန်သောအခါ ကျနော့်အတွက် ဒုတိယမြောက် မလွတ်လပ်ရေးနေ့ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပြန်သည်။ ဤသို့ဖြင့် နောက်ထပ်ခြောက်လအကြာ ၁၉၇၅ ဇွန် (၁၁) ရက်နေ့သည်လည်းကောင်း၊ ၁၉၇၆ ခု မတ်လ (၂၃) ရက်သည်လည်းကောင်း နောက်ထပ်နောက်ထပ် မလွတ်လပ်ရေးနေ့များဖြစ်ခဲ့ရပါသည်၊
စင်စစ်အားဖြင့် ကျနော်တဦးတည်းအနေဖြင့် မစဉ်းစားမခံစားဘဲ မြန်မာနိုင်ငံလူ့အဖွဲ့အစည်းအရ ကြည့်လျှင်မူ ၁၉၆၂ ခု မတ်လ (၂) ရက်နေ့သည် ပထမဦးဆုံးသော မူလလက်ဟောင်း မလွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်သည်ကို နောက်ပိုင်းတွင် ကျနော်သိလာခဲ့ရပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဘ၀များနှင့် ဆက်နွယ်ပြီး လောကအမြင်များ ရရှိလာသလို ထိုဘ၀များကို ထင်ဟပ်နေသည့် စာပေ၊ စာနယ်ဇင်းတို့မှလည်း လောကအသိတရားများ ရရှိလာခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၄ ဇွန် (၆) ရက်၊ ၁၉၇၄ ဒီဇင်ဘာ (၁၁) ရက်၊ ၁၉၇၅ ဇွန် (၁၁) ရက်၊ ၁၉၇၆ မတ် (၂၃) ရက်တို့သည် ၁၉၆၂ မတ်လ (၂) ရက်နေ့မှစတင်ခဲ့သော မလွတ်လပ်ရေးနေ့ရှည်ကြီးအတွင်းမှ ၁၉၆၂ ခု ဇူလိုင် (၇) ရက်လို မလွတ်လပ်ရေးနေ့၊ ကစားခုန်စားပွဲများသာ ဖြစ်နေသည်ကို တုန်လှုပ်ချောက်ချားစွာ တွေ့ရှိသွားမိပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ၁၉၈၈ ခု မတ်လ (၁၃) ရက်သည်လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၈ ခု ဇွန်လ (၂၁) ရက်သည်လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၈ သြဂုတ် (၈) ရက်သည်လည်းကောင်း၊ မလွတ်လပ်ရေးနေ့ မပျော်ပွဲမရွှင်ပွဲများ အထူးဝှဲချီးကျင်းပရာကာလများ ဖြစ်သွားပါတော့သည်။
၁၉၈၈ ခု သြဂုတ် (၁၂) ရက် ဖက်ဆစ်လက်ရုံး လူသတ်သမ္မတ ရာထူးကျပြီးနောက် သြဂုတ် (၂၆) ရက် ရွှေတိဂုံ အနောက်မုခ်၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထူထုရင်ထဲသို့ လွတ်လပ်ရေးပန်း မျိုးစေ့ချလိုက်သည့်အခါ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့သော လွတ်လပ်ရေးနေ့၏ ရနံ့များကို ဝေ့ခနဲ ရှူလိုက်ရပါသည်၊ သို့သော် လွပ်လပ်ရေးနေ့၏ ရနံ့မွှေးမြမြလေးမှာ တလမကြာမီ လွင့်ပြယ်သွားခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခု စက်တင်ဘာ (၁၈) ရက်သည် ရိုင်းစိုင်းညစ်ထေးလှသော မလွတ်လပ်ရေးနေ့သစ်အဖြစ် ယမ်းငွေ့ တလူလူလွင့်ကာ မပျော်ပွဲမရွှင်ပွဲ အကြီးအကျယ်ပွဲခံခဲ့ပါသည်။
မလွတ်လပ်ရေးနေ့သည် ၁၉၆၂ ခု မတ်လ (၂) ရက် သို့မဟုတ် ၁၉၈၈ ခု စက်တင်ဘာ (၁၈) ရက်တို့တွင်သာ မြစ်ဖျားခံခဲ့သည်မဟုတ်ပါ။ မြန်မာပြည်ဖွားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအတွက် သီးသန့်မလွတ်လပ်ရေးနေ့များ စောစွာကတည်းက ရှိခဲ့သည်ကို ကြည့်သောသူ မြင်တွေ့သိမှတ်လာရပါသည်။
၁၇၅၇ ခု မေလ (၆) ရက်သည် မွန်အမျိုးသားတို့၏ လွတ်လပ်သော ဟံသာဝတီနိုင်ငံကို မုဆိုးဘိုရွာသူကြီး တဖြစ်လဲ ရွှေဘိုဘုရင် ဦးအောင်ဇေယျက သိမ်းပိုက်ဖျက်ဆီးလိုက်သော မလွတ်လပ်ရေးနေ့ တနေ့ဖြစ်ပါသည်။ မွန်တို့မှာ ၁၇၄၀ ခုနှစ်စ၍ အင်းဝဘုရင် မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိကို စတင်တော်လှန်ခဲ့သော်လည်း ၁၇၅၁ ခုနှစ်ကျမှ လွတ်လပ်သော တတိယမွန်နိုင်ငံ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍ လွတ်လပ်ရေးနေ့ကို (၆) နှစ်သာ ခံစားလိုက်ရပါသည်။ သည့်အရင်ကမူ ၁၀၅၇ ခု အနော်ရထာဘုရင် သထုံမသိမ်းမီ ပထမမွန်နိုင်ငံ နှစ်ပေါင်း (၅၀၀) ခန့်၊ ပုဂံပျက်ပြီးနောက်ပိုင်း ၀ါရီရူမင်း၏ အဆက်အနွယ်များ ယိုးဒယားမင်းသြဇာခံဘ၀မှ ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့သည့် ၁၃၄၀ ခုနှစ်နှင့် တောင်ငူဘုရင်တပင်ရွှေထီး ဟံသာဝတီသိမ်းသည့် ၁၅၃၆ ခုကြား ဒုတိယမွန်နိုင်ငံ နှစ်ပေါင်း (၂၀၀) နီးပါး စသည်ဖြင့် လွတ်လပ်ရေးနေ့များကို ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ပထမဦးဆုံးသော မွန်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်သည့် ၁၀၈၃ ခု ငရမန်ကန်း၏တော်လှန်ရေးကို ကျန်စစ်သားက ချေမှုန်းပစ်ခဲ့သလို နောက်ဆုံး မွန်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်သည့် ၁၈၂၇ ခုနှစ်ဆန်း သမိန်ဗရူးခေါင်းဆောင်သော မွန်နှင့်ကရင်တို့၏ တော်လှန်ရေးကိုလည်း ဘကြီးတော်မင်းက နှိမ်နင်းပစ်ခဲ့ပါသည်။
အလောင်းဘုရားခေါ် ဦးအောင်ဇေယျနှင့် ဗမာအမျိုးသားတို့မှာ ၁၇၅၂ ခု မတ်လ (၁၁) ရက်တွင် အင်းဝဘုရင် မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိအား ဟံသာဝတီနိုင်ငံက လက်ရဖမ်းဆီးပြီး အင်းဝတနိုင်ငံလုံးကို သိမ်းပိုက်လိုက်ချိန်မှ ၁၇၅၄ ခု ဇန်န၀ါရီ (၃) ရက်တွင် အင်းဝမြို့တော်ကို မွန်တို့လက်လွှတ်လိုက်ရချိန်အထိ မလွတ်လပ်ရေးနေ့ကို ခံစားခဲ့ရသည်။ ယင်း၏အကျိုးဆက်အဖြစ် ဦးအောင်ဇေယျက မွန်အမျိုးသားတို့ကို ၁၇၅၇ ခု၌ မလွတ်လပ်ရေးနေ့ တန်ပြန်သက်ရောက်စေခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် လူမျိုးရေးအရ လက်စားချေသန့်စင်ပစ်မှုကြောင့် မွန်အမျိုးသားတို့ ခံစားရသော မလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ပို၍ပြင်းထန်ခါးသီးခဲ့ပါသည်။ တချိန်က မွန်အမျိုးသားတို့ ပျံ့နှံ့ပွားစီးရာ အောက်မြန်မာပြည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကြီးတခုလုံးတွင် မွန်များ ပြောင်တလင်းခါသွားခဲ့ပါသည်။
၁၇၈၄ ခု ဒီဇင်ဘာ (၂၈) ရက်မှာမူ ရခိုင်အမျိုးသားတို့၏ မလွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းနေ့တွင် အင်းဝဘုရင် ဘိုးတော်ဘုရားခေါ် မောင်ဝိုင်းက လွတ်လပ်သော မြောက်ဦးနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသည်။ ယခင်က ပုဂံမင်း၊ အင်းဝမင်း ဟံသာဝတီမင်းတို့ထံ လွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းများ ရှိသော်လည်း ယခုနောက်ပိုင်းအကြိမ်လို ကြာရှည်ခြင်းမရှိခဲ့။
ရှမ်းတို့၏ မလွတ်လပ်ရေးမှာမူ ၁၅၅၈ ခုကပင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းနှစ်တွင် တောင်ငူ-ဟံသာဝတီဘုရင် ဘုရင့်နောင်က ယခုအထက်မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ လွတ်လပ်သော ရှမ်းစော်ဘွားနယ်အားလုံးကို အပြီးအပိုင် သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းဖြင့် ရှမ်းတို့၏မလွတ်လပ်ရေးနေ့များ စတင်ခဲ့ပါသည်။ သည့်အရင်က ရှမ်းတို့သည် ၁၄၅၀ ခုအထိ ရွှေလီကို ဗဟိုပြုသော လွတ်လပ်သည့် မောရှမ်း ဘုရင့်နိုင်ငံကြီးကို တည်ထောင်စိုးစံခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုမျှမက ပုဂံပြည်ကို မွန်ဂိုတို့ သိမ်းပိုက်ဖျက်ဆီးပြီးနောက် ရှမ်းတို့က လွတ်လပ်သော အင်းဝနိုင်ငံ ထူထောင်ခဲ့ရာ ၁၅၅၅ ခု အင်းဝကို တောင်ငူဘုရင် တပင်ရွှေထီး သိမ်းပိုက်သည့်အချိန်ထိ ရှမ်းမင်းများ၊ ဗမာမင်းများ သို့မဟုတ် ရှမ်းဗမာကပြားမင်းများက ရှမ်း-ဗမာပူးတွဲနိုင်ငံဖြစ်သော အင်းဝထီးနန်းကို အုပ်စိုးခဲ့ကြပါသည်။
ကရင်နီတို့၏ မလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ၁၉၄၈ ခု သြဂုတ်လ (၉) ရက်ဖြစ်ပါသည်၊ ၁၈၇၅ ခု အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ စာချုပ်အရ အနောက်ပိုင်းတခြမ်း လွတ်လပ်ရေးရထားသော ကရင်နီပြည်ကို ဖဆပလဦးနု၏တပ်များက ထိုနေ့တွင် တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်သဖြင့် မလွတ်လပ်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လက်နက်အားကိုး စုစည်းထားသော ရှေးဟောင်းမြန်မာနိုင်ငံအဖို့ ကမ္ဘာ့နယ်ချဲ့စနစ်ဟူသော ပထမဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့် ကြုံရသည့်အခါ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးအတွက် မလွတ်လပ်ရေးနေ့များပေါင်းဆုံသွားခဲ့ပါသည်။ ရန္တပိုစာချုပ် ချုပ်ပြီး ပထမအင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ် အဆုံးသတ်သွားသော ၁၈၂၆ ခု ဖေဖေါ်ဝါရီ (၂၄) ရက်သည်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယစစ်အပြီး အောက်မြန်မာနိုင်ငံကို ဗြိတိသျှသိမ်းပိုက်ကြောင်း ကြေညာသည့် ၁၈၅၂ ခု ဒီဇင်ဘာ (၁၇) ရက်သည်လည်းကောင်း၊ တတိယစစ်အပြီး မြန်မာ့အချုပ်အခြာပြယုဂ် သီပေါမင်း ပါတော်မူသည့် ၁၈၈၅ ခု နိုဝင်ဘာ (၂၉) ရက်သည် လည်းကောင်း၊ တတိယစစ်အပြီး မြန်မာ့အချုပ်အခြာ၏ပြယုဂ် သီပေါမင်း ပါတော်မူသည့် ၁၈၈၅ ခု
နိုဝင်ဘာ (၂၉) ရက်သည်လည်းကောင်း၊ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအား ဗြိတိသျှအင်ပါယာတွင်း
တရားဝင်သွတ်သွင်းလိုက်သည့် ၁၈၈၆ ခု ဇန်န၀ါရီ (၁) ရက်နေ့သည်လည်းကောင်း ထပ်ဆင့်မလွတ်လပ်ရေးနေ့များ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ဤသို့သော မလွတ်လပ်ရေးနေ့များသည် ၁၉၄၇ ခု ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၂) ရက်၌ တခုတည်းသော လွတ်လပ်ရေးနေ့အဖြစ်သို့ လှပစွာ ပေါင်းစည်းသွားနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ အမြော်အမြင်ကြီးမားပြီး စိတ်ရင်းစေတနာ ပြည့်ဝလှသော အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် အလားတူ ဉာဏ်ပညာကြီးမားသော တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တို့နှင့်အတူ၊ ပင်လုံစာချုပ်အားဖြင့် မြန်မာပြည်ဖွား တိုင်းရင်းသားအားလုံးအတွက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ကို ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ရန် လုံ့လစိုက်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။
သို့ရာတွင် ယင်းတိုင်းရင်းသားအားလုံး၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့အလင်းစသည် ဗိုလ်ချုပ်ကျဆုံးခြင်းနှင့်အတူ ပိတ်ဖုံးသွားခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၄၈ ခု ဇန်န၀ါရီ (၄) ရက် လွတ်လပ်ရေးနေ့သည် အနော်ရထာ-ကျန်စစ်သား၊ တပင်ရွှေထီး-ဘုရင့်နောင်၊ ဦးအောင်ဇေယျ-ဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းတို့၏ မျိုးဆက်သစ် ဖဆပလ-ဆိုရှယ်လစ်ခေါင်းဆောင်များက တိုင်းရင်းသားတို့အပေါ် မလွတ်လပ်ရေးပေးသောနေ့ ဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများသာမကဘဲ ကျောမွဲနင်းပြားလူတန်းစားများအတွက်လည်း မလွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်နေခဲ့ရပါသည်။
ဤမလွတ်လပ်ရေးနေ့များသည် ၁၉၆၂ ခု မတ်လ (၂) ရက်တွင် အဆင့်သစ်တခုဆီ ပေါင်းဆုံတိုးတက်သွားခဲ့သည်။ လက်တဆုပ်စာ စစ်အုပ်စုမှအပဖြစ်သော လူမျိုးအားလုံး၊ လူ့အလွှာအားလုံး၊ လူတန်းစားအားလုံး၏ မလွတ်လပ်ရေးနေ့များသည် ၁၉၈၈ ခု စက်တင်ဘာ (၁၈) ရက်တွင် နောက်ထပ်တဖန် တဆင့်မြင့်ပေါင်းစည်းသွားခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၀ မေ (၂၇) ရက်နေ့တွင်မူ မလွတ်လပ်ရေးနေ့အောက်မှ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကို ထူးထူးခြားခြားကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ထုံးစံအတိုင်း ဤပျော်ပွဲရွှင်ပွဲသည် မကြာမီခဏတိုအတွင်း မပျော်မရွှင်ပွဲအဖြစ်သို့၊ မလွတ်လပ်ရေးနေ့စစ်စစ် အဖြစ်သို့ ကြေကွဲနာကျင်စွာပြောင်းလဲသွားရပါသည်။
ကျနော်တို့အားလုံး၏ မလွတ်လပ်ရေးနေ့များကို သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော၊ တခုတည်းသော လွတ်လပ်ရေးနေ့အဖြစ် တပျော်တပါးဝိုင်းဖွဲ့ဆင်နွှဲ ခံစားနိုင်ဖို့ အားလုံးမှာ အိပ်မက်များရှိနေပါသည်။ ။
ရှားပါးမှု၊ တောင်ကျချောင်းနှင့် ရေသတ္တ၀ါများ
ချောင်းရေသည် တိတ်ဆိတ်မှုနှင့် ကျနော်တို့အား စောင့်ကြိုနေသည်။ ကျနော်တို့ရောက်ခဲ့ကြပြီ။ မည်သူမျှ အခါမလင့်ကြ။ ကျနော်တို့နေထိုင်ရာ
ဒေသသည် မိမိ၏ စိတ်ဆန္ဒတွင်တည်ရှိသော
စားသောက်ဖွယ်ရာများကို လွယ်လင့်တကူ ရရှိနိုင်သည်မဟုတ်။ အခွင့်အခါကြုံမှသာ တွေ့မြင် ထိတွေ့ခွင့်ရသည် မဟုတ်လော။ ထို့အတွက် ဤမနက်ခင်းတွင် ယမန်နေ့ညတုန်းက မည်မျှပင် ခေါင်သောက်များသည်ဖြစ်စေ၊ အိပ်ရေးပျက် သည်ဖြစ်စေ၊ မည်သူမျှ နောက်ကျမခံကြ။
အိပ်ရေးပျက်နေသည့်၊ အမူးလွန်နေသည့် မျက်လုံးနီရဲရဲများဖြင့်၊ အိမ်မှ ဘုစုခရုများ၊
ချစ်လှစွာသောဇနီးများ၊ တောလိုက်ရာတွင်အသုံးကျသည့် သတ္တ၀ါများ (အထူးသဖြင့် ခွေးများ) ကို တစုတစည်းတည်း ပေါင်းစုခေါ်ဆောင်ကာ သုံးနှစ်ကြာမျှ စောင့်မျှော်ခဲ့ရသည့် စားကျက်ဆီသို့ ချီတက်လာခဲ့ကြသည်။ နှင်းအကြွင်းအကျန်အချို့၏ ဖွဲ့တည်မှုကြောင့် တောင်ယာဖုန်းဆိုးများပေါ်တွင် ရေစက်များထိကပ် နေသော မြက်ရိုင်းပင်များကို တရှဲရှဲတိုး၍ မပွင့်တပွင့် အရုဏ်အောက်၌ ကျနော် အပါအ၀င် ရွာသူ ရွာသားတပ်ပေါင်းစုကြီး၏ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် အသံများကြောင့် ချောင်း၊ တောတောင်တို့သည် ထိတ်လန့်တကြား လန့်နိုးထလာခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ “ဟုန်း” ထုရန် လာခဲ့ကြလေပြီ။
ထိုသို့သောလုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုမူဆောင်ရွက်နေဆဲကာလအတွင်း ကျနော့်ထံ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှု ကော်မတီမှ စေလွှတ်လိုက်သည့် ဆက်သားတဦး ရောက်ရှိလာသည်။ သူ့တွင် အလုပ်ခန့်အပ်စာ တစောင် ပါလာသည်။ ကျနော် “ဟုန်း” ကော်မတီဖြစ်သည့်စာ။ ဟုန်းဆိုသည့်စကားလုံးမှာ ကျနော်နှင့်မရင်းနှီးသည့် အသုံးအနှုံး။ သို့သော် ကျနော်မှလွဲ၍ ကျန်သော ကျေးရွာသူရွာသား
များက ရင်းနှီးကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျနော်က ဒေသခံမဟုတ်။ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးသမားတဖြစ်လည်း ကျောင်းဆရာတဦး သို့တည်းမဟုတ် အပစ်ရပ်နယ်မြေတခု၏ မြို့နယ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် တရားရေးဌာနမှ။
ကျနော်ရပ်တည်နေရသည့်ဒေသသည် ရေထွက်ပစ္စည်းများ အရောက်အပေါက်နည်းသည်။ သို့အတွက် ရေထွက်သတ္တ၀ါအခြောက်အခြမ်းများသည်ပင် ဒေသခံတို့၏အလိုဆန္ဒကို မဖြည့်
တင်းနိုင်။ ထိုအလိုဆန္ဒအား ဖြေဖျောက်နိုင်ရန် ဟုန်းဆိုသည့်အရာကို အားကိုးအားထားပြုရသည်။ ဟုန်းဆိုသည်က ရေတွင်မှီတင်းနေထိုင်သော ရေသတ္တ၀ါများကို မူးမိုက်စေသည့် အစေးခပ်ပျစ်ပျစ် များထွက်သည့် နွယ်ဆန်ဆန်အမြစ်များ။ ထိုအမြစ်များကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏ ဒေသအတွင်းရှိ ချောင်းများတွင် မှီတင်းနေထိုင်သည့် ငါးများကို ရှာဖွေစားသုံးကြရသည်။ သူတို့အနာဂတ်ဖြစ်သော ဆန်စပါးများရရှိရေးအတွက် တောင်ယာဆူးထိုးသောအခါ ရေသတ္တ၀ါများ၏အရသာသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်လာသည်။ အကြောင်းမူ သူတို့၏ဘ၀တူများက လာရောက်၍ သူတို့အားကူညီသောအခါ ကျွေးမွေးရန်အလို့ငှာဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် တခုပြောရန်ရှိသည်မှာ ဟုန်းကော်မတီဝင်များသည် အခြားသော ရွာသူရွာသား များထက် အခွင့်သာမှုတခုရှိသည်။ ကော်မတီဝင်တိုင်းသည် ရွာသူရွာသားများအား သတ်မှတ် ထားသော ဟုန်းမြစ်အရေအတွက်ကို ပေးဆောင်ရန်မလိုပါချေ။ သို့အတွက် ကျနော့်ကို ဟုန်း ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ခန့်သည်မှာ အားနာသည်ကတကြောင်း၊ ဟုန်းမြစ်အား မည်သို့ရှာရမည်ကို မသိသည်ကတကြောင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ လိုအပ်လျှင်ကား လက်လီဝယ်၍ရသည့် ဟုန်းမြစ်
ရှာသူများရှိသည်။ သို့သော် ကျနော်ဝယ်လျှင် မည်သူမျှရောင်းမည်မဟုတ်သည့်အပြင် အလကား ပေးရမည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဟုန်းကော်မတီဝင်အဖြစ် နားအေးပါးအေး ခန့်လိုက်ဟန်ရှိသည်။
ကျနော်တို့ ဟုန်းထုရန်သတ်မှတ်ထားသောနေရာ ရောက်သောအချိန်တွင် နေခြည်သည် အရှေ့ ဘက်အရုဏ်ဦးမှ ပေါ်လာ၍ ချောင်းအတွင်းသို့ မရောက်တရောက်အချိန်သာဖြစ်သည်။ ဟုန်း
ကော်မတီဝင်တဦး၏တာဝန်ကို တွေးကြည့်ပါက စိတ်ညစ်ညူးဖွယ်ကောင်းလှသည်။ သို့သော် မတတ်သာ။ တာဝန်သည် တာဝန်သာဖြစ်သည်။ အလုပ်သည် အလုပ်သာဖြစ်သည်။ ကျနော်က
တာဝန်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးသည်။ ရဲဘော် …. ဆက်လုပ်ဟူ၍။
ထို့နောက် မိသားစုတစုချင်းသည် ကျနော်တုိ့ ဟုန်းကော်မတီအခြေစိုက်သောနေရာသို့ မိမိတို့ မိသားစုတွင်ပါလာသည့် ဟုန်းမြစ်များကို သယ်ပိုး၍ရောက်ရှိလာသည်။ ထိုအခါ ကော်မတီက ချိန်ခွင်တလက်ဖြင့် ချိန်တွယ်ပေးရသည်။ ဟုန်းမြစ်တူးရာတွင် သတ်မှတ်ချက်ရှိသည်။ လူကြီး ငါးပိဿာ၊ ကလေး သုံးပိဿာ စသဖြင့်။ သို့သော် နားလည်မှုသည် နေရာတိုင်းတွင် ထွန်းကား
သည်။ ဟုန်းပြည့်ချင်း မပြည့်ခြင်းသည် ဆွေမျိုးညာတိစိတ်ဓာတ်နှင့် မကင်းမကွာ။ သွေးရင်း သားရင်းစိတ်ရှိကြသည်။ ပြုံးကြ၊ ရယ်မောကြသည်။ နောက်ကြပြောင်ကြသည်။ သို့သော်
မည်သူမျှ အလေးချိန်မပြည့်ဟုဆိုပြီး ဟုန်းပွဲမှ မထွက်ခွာသွားစေရ။ ဘ၀ဒဏ်ကြောင့် မပျော်ရွှင် နိုင်သော ဒေသအတွက် ဤကဲ့သို့ ရွာလုံးကျွတ်စု၍ ငါးဖမ်းရခြင်းသည်ပင် ပင်ပန်းသော်ငြား ပွဲတော်တခုပင် မဟုတ်ပါလား။
ထိုအချိန်တွင် ချောင်းနံဘေး၌ သစ်ခုတ် ၀ါးခုတ်သံ ပွက်ညံနေသည်။ ငါးဘူးနှင့် ထမင်းဖုတ်သည့်
အနံ့ ပျံ့လွင့်နေသည်။ ရယ်မောကြည်စယ်သံများ သောသောအုတ်အုတ်ရှိသည်။ ခေါင်ဖောက်သူ ဖောက်၊ သောက်သူသောက်နှင့် ငိုသည့်ကလေးကငို၊ ဆူသည့်အမိုးကဆူကြ။ ချောင်းရေက ထိုအချိန်တွင် ကြည်လင်စွာစီးဆင်းနေဆဲ။
ဖျတ်ခနဲ ခြေသံကြား၍ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျနော်၏တောင်ပေါ်သူ၊ “ထမင်းစားမယ်လေ၊ အမိုးကခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်” ဆိုတော့ ကျနော့်ခြေလှမ်းများက သူ့နောက်ပါသွားခဲ့သည်။ ဖောက် ခေါင်ပြင်းပြင်းကို ၀ါးခွက်နှင့် နှစ်ခွက်လောက်သောက်မိပြီး ထမင်းစားရင်း စကားပြောတော့ စကားသံများက ချောင်းရေစီးသံနှင့်အပြိုင်။ ချောင်းနံဘေး တဖက်တချက်ဆီမှာတော့ ဟုန်း မြစ်များကို ပေါ်နေသည့်ကျောက်တုန်းများအပေါ်တင်၍ ထုနေသည့်အသံများက ရီဝေနေသည့် နားများထဲသို့ စူးစူးရဲရဲတိုးဝင်လာသည်။
နေလည်းမြင့်လှပြီ။ လူများလည်း သွေးကြွနေကြပေပြီ။ သူတို့၏မျက်ဝန်းများတွင် မိသားစုအတွက် စားကောင်းသောက်ဖွယ်ဖြစ်သည့် ရေသတ္တ၀ါများအား တွေ့နေရပြီဖြစ်သည်။ သူတို့၏လက်မောင်း များသည် အိမ်နီးနားချင်းများအား ဟင်းကောင်းတခွက်ပေးရန်အတွက် ရေသတ္တ၀ါများအား ဖမ်းဆီး ရန် အသင့်ဖြစ်နေလေပြီ။ သူတို့၏ခြေလှမ်းများသည်လည်း ထို့အတူပင် တောင်ပေါ်ဒေသမှ မြေပြန့် ဒေသသို့ ရေသတ္တ၀ါများကို မရောက်ရှိသွားစေရန်အတွက် အပြေးလှမ်းရန် အသင့်ဖြစ်နေလေပြီ။ ထိုအရာများကို မည်သူမျှ သင်ပေးသည်မဟုတ်။ သူတို့၏ဘ၀က သူတို့၏အသက်ရှင်နေထိုင်မှုကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်မဟုတ်လော။
လူအုပ်တအုပ်၏ စိတ်မရှည်သည်းမခံနိုင်မှုကို မည်သူမျှ တားဆီးနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။ ကော်မတီဖွဲ့၍ တားခဲ့လျှင်လည်း အချိန်သည် တဒင်္ဂမျှသာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့အတွက် ပေါက်ကွဲလုဆဲဆဲ အချိန်တွင် ကျနော်တို့ ဟုန်းကော်မတီသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်မတိုင်မီ အနည်းငယ်စောစွာ တူမီးသေနတ်ကို ဖောက်လိုက်နိုင်လေသည်။ ထိုအခါ လူအုပ်ကြီးသည် ရေထဲတွင်ရှိသည့် အရာ အားလုံးသည် မိမိတို့တဦးချင်းစီနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဆိုသည့် အမူအရာမျိုးနှင့် ချောင်း၏ ရေအလျင်နှင့်အတူ ပြေးလွှားသွားကြသည်။ ငါးမိနစ်ခန့်ကြာသောအခါ နောက်ကျိနေသည့်
ချောင်းရေပြင်အလယ်တွင် ကျနော်တဦးတည်းသာ ကျန်ခဲ့သည်။ ငါးများစတင်၍ မူးဝေမှုကြောင့် ရေမျက်နှာပြင်အပေါ်သို့ တက်လာကြပြီဖြစ်သည်။ ကျနော်နှင့် ရှေ့ကိုက်တရာအကွာတွင် ရွာမှ ကျနော်နှင့်ခင်မင်သော အဖွားကြီးများ။ ကျနော် အမီလိုက်ရသည်။ သူတို့က ယက်သဲ့နှင့် ချောင်း နံဘေးတလျှောက် ငါးမှုန် ငါးမွှားများ ထိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုငါးများသည်ပင် မူးယစ် နေကြပြီ။ အသက်ကုန်နေကြလေပြီ။ သူတို့နှင့်အပြိုင်လု၍ ယက်သဲ့ထိုးသော်လည်း ဘ၀အတွေ့
အကြုံက လက်တွေ့ကိုပြဋ္ဌာန်းသည် မဟုတ်လော။ သို့အတွက် ကျနော်သည် သူတို့လောက် မကျွမ်းကျင်၍ သူလို့လောက်မရချေ။
ကျနော်ဆက်၍ လျှောက်သွားသည်။ ချောင်းသည် တဖြည်းဖြည်းကျဉ်းလာသည်။ တခါတရံ နက်သွားသည်။ နေခြည်သည်လည်း အနောက်ဘက်စွန်းစွန်းသို့ မျက်စပစ်နေသည်။ ချောင်း အောက်ပုိုင်းရောက်လာသည်နှင့်အမျှ အခြားရွာ၏ ရေပိုင်နက်နှင့် နီးသောနေရာ ရောက်လေလေ၊ အရှေ့မှဆင်းသွားသောလူများကို မီလာလေလေ ဖြစ်လာသည်။ ဖြစ်ချင်တော့ ချောင်း၏ ရေနက် ပိုင်းတနေရာတွင် ရွာသားများက ရေငုပ်၍ ငါးဆယ်နေကြသည်။ ထိုနေရာ ရောက်သောအခါ ကျနော်လည်း စတန့်ပြချင်သည့်သဘောလား၊ ငါးရချင်သည့် ဆန္ဒကြောင့်လားမသိ၊ ချောင်းထဲသို့ ရေငုပ်လိုက်မိသည်။ ထိုအခါ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိ ကျနော်၏ချစ်သောရွာသားများက ၀ါးခနဲ
ရယ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျနော် ရေသာငုပ်လိုက်သည်၊ ငါးတကောင်ရသည်ကား မှန်ပါသည်။ ကျနော်ရေငုပ်စဉ် ယခင်ငါးဖမ်းစဉ်က လွယ်ခဲ့သော ပလိုင်းအား ချွတ်ရန်မေ့ခဲ့သည့် အတွက် ပလိုင်းထဲရှိငါးများအားလုံး ရေထဲသို့ ပါသွားခဲ့၍ဖြစ်သည်။
ညနေစောင်းပြီဖြစ်၍ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ချမ်းစပြုချေပြီ။ အဖော်အဖြစ်ရှိနေသည့် အမိုးများထံမှ ခေါင်အိုးတောင်း၍ သောက်ပြီး ဆေးရွက်ကြီးကို မြုံ့လိုက်သည်။ နည်းနည်းတော့ နွေးသွား
သလိုပင်။ ဆက်၍ နည်းနည်းလျှောက်တော့ ရွာနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ထားသော တောင်တက်
လမ်းအား မြင်နေရပြီ။ ငါးက ဘာမှမရသေး။
ဘေးရေထဲသို့ ခဲတလုံးကျသံကြားရသည်။ မော့ကြည့်တော့ ချောင်းကမ်းပါးစပ်မှာ တောင်ပေါ်သူ။ တက်ခဲ့ရန် အချက်ပြသည်။ အမိန့် မလွန်ဆန်နိုင်ပါ။ တက်သွားတော့ သူနှင့် သူ့မောင်လေးငယ်ငယ်။ “ပြန်ကြရအောင်” ဆိုသည်။ ဘာမှမပြောမိ။ သူက အရှေ့က ပလိုင်းနှင့်တရွေ့ရွေ့။ နေရောင်က ရွာပြန်သည့် တောင်ကုန်းအမြင့်ပေါ်ရောက်လေလေ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ စူးစူးရဲရဲ။ လမ်းတ၀က် ရောက်လုဆဲမှ “ပြကြည့်ပါဦး၊ ငါးဘယ်လောက်ရလဲ” မေးသည်။ “မကြည့်ပါနဲ့၊ ဘာမှမရဘူး” “မဟုတ်ဘူးလေ၊ ကြည့်တယ်ဆိုတာ မရဘူးဆိုတာတော့ သိတာပေါ့။ ဒါမှ ကျန်တဲ့ ဆေးမှူးတုိ့၊
ရဲဘော်တို့ကို စားဖို့ထည့်ပေးဖို့အတွက် ချိန်လို့ရတာပေါ့”။ အဲဒီကျတော့လည်း ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်ပေါ့။ ရွာအ၀င် ဘုရားကျောင်းနံဘေးရောက်တော့ လမ်းခွဲရတော့မယ်။ သူကတလမ်း၊ ကျနော်ကတလမ်း။ လမ်းခွဲရောက်လုနီးကာမှ သူ့မောင်လေးကို လက်ဆွဲခေါ်ပြီး ပြောသည်။ “ညကျရင် အိမ်မှာခေါင်လာသောက်ပြီး ထမင်းစား၊ ပြီးတော့ ဟုန်းကော်မတီလည်း ဘယ်တော့မှ မလုပ်နဲ့၊ ရှက်စရာကြီး၊ ငါးက ဘာမှလည်းရတာမဟုတ်ဘူး။” သူကျီစယ်မှုမှန်းတော့ သိပါသည်။ သို့သော် ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် အတွေ့အကြုံဆိုသည်မှာ ဤကဲ့သို့သာ သင်သွားရသည် မဟုတ်ပါလား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုညကတော့ ကျနော် သူ့အိမ်သွားပြီး ငါးဟင်းမြည်းလို့၊ ခေါင်ရည်တွေသောက် လုပ်ခဲ့သေးသည်။ ကဲ နောက်တခါလုပ်မယ့် ဟုန်းပွဲတော်က နောက်သုံးနှစ်ကြာမှတဲ့။ ဘယ်သူ
တွေက အဝေးရောက်၍ ဘယ်သူတွေကျန်ခဲ့မလဲ။ မည်သူမျှ မှန်းဆနိုင်တော့မည်မဟုတ်။ အဝေး ရောက်သူတွေကတော့ ဝေးဝေးကသာ သတိရနေရပေမည်။ ကျန်ခဲ့သူတွေကတော့ ပင်ပန်းတကြီး ဟုန်းပဲဆက်ထုနေရမှာလား၊ အပစ်ရပ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်အရ ရေသတ္တ၀ါများကို ဖောသီစွာ စားသုံးနေနိုင်မည်လား။ အခုတော့ အိမ်တိုင်းတွင် ငါးကျပ်တင်သည့် ရနံ့က ရွာလေထုအတွင်း ပျံ့နှံ့နေဆဲ။ ။
(၁) အဲဒီ အထွတ်အမြတ် အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်ကြီးက '...
▼ Jul 06 (54)
၄၇ နှစ်မြောက် ၇ ရက် ဇူလိုင် ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံ ...